Ao amin'ny programa fanofanana momba ny tokantrano sy ny sakafo izay miasa - Method Makia
Fahaiza-manao Makia: Inona no fiofanana goavana midadasika sy ketogenea?
Ny Method Makia dia fampiharana fampihatra natao tany Failandy, izay lasa foto-kevitra malaza any amin'ny tanindrazany nandritra ny roa taona. Ny rafitra dia manolotra drafitra fanatontosana sarotra izay azo tanterahina ao an-trano na ao amin'ny gym. Ny fahasarotan'ny fampiharana dia mihamitombo haingana rehefa mampiofana. Ny Methia Makia dia ahitana ihany koa ny sakafo izay ahitan'ny mpisera an'arivony amin'ny lanjany tsara ary manatsara ny fahazaran-dainy.
Ny tantaram-piainan'ny Diarimety momba ny Metodi Makia
Nanao fanazaran-tena aho nandritra ny androm-piainako, fa tamin'ny 35-40 taona teo ho eo dia nanomboka nanangom-bolo ny vatako - curso fotografia canon t3. Nitranga tsy nahy sy tsy noraisina ilay fiovana. Fotoana noraisina tamin'ny andro fahavaratra iray teny amoron-dranomasina no nanokatra ny masoko.
Nihanatanjaka ny tenako, saingy rehefa nahita ny sary aho dia nandeha tany amin'ny ambaratonga ary nahatsikaritra ny fahagagako fa nihanitombo be ny lanjako. Nanontany tena aho hoe inona no mety ho diso.
Nihinana tsiranoka marevaka aho, mofomamy marefo, ronono milomano, zava-pisotro mamy malefaka, tsaramaso malefaka, legioma miaraka amin'ny akanjo salady misy menaka salady, karazana proteinina ary hena masira ihany. Araka ny hevitro, nihinana salama aho, araka ny torolàlana ankapobeny. Nisy zavatra tsy nety, ratsy diso.
Nandinika ny soatoavina kolesterola aho ary tsy tsara. Ny kôlesterôla ratsy dia avo loatra ary ny ambany loatra. Rehefa avy nangataka torohevitra aho, dia nahazo torolàlana momba ny fomba hampihenana ny fetin'ny sakafo.
Ahoana no ahafahako mampihena ny tavy avy amin'ny sakafoko? Ankoatra izany, ilay olona nanome ahy ny torohevitra dia mihoatra noho ny teo aloha. Teraka ny olana.
Niasa tamina asa izay tena ilaina tokoa ny fahalalana momba ny fiasan'ny vatana. Nanana fanabeazana tsara sy fahalalana fototra mba hamahana ny olana aho. Nanomboka nikaroka bebe kokoa ny metabolisman'ny vatana aho. Hitako rehefa mampiasa kôbhydrate ny vatana ary rehefa mandoro ny taviny. Tsapako fa haingana be ny fihinanan-tsiramamy sy ny proteinina avo be tsy misy fatin-dite voajanahary mba hampiakatra ny vatana ho any amin'ny fanjakana izay ahazoan'ny hery manangona ny angovo rehetra ary tsy hitrangan-javatra firy mihitsy. Raha ny habetsaky ny kaloria avy amin'ny sakafo dia kely loatra ary ny fiterahana matavy dia tsy mitranga, ny vokatra dia ny harena voajanahary.
Nifankahalala tamin'ny Dr. Atkins diet. Adi-hevitra mahatsiravina sy malemy, fa ny hevitra fototra dia tonga lafatra. Olona an-tapitrisany an-tapitrisany no mahatratra lanjany ara-dalàna. Ny vatana dia tarihin'ny ronono ao amin'ny fanjakana iray izay saika ny angovo rehetra avy amin'ny feta. Ny vatany dia eo amin'ny tohin'ny tavy mirehitra, ary ny fihenan'ny lanjany dia haingana kokoa noho ny fifadian-kanina. Ny rafitra dia mandoro tsy tapaka ny tahirin-tsakafo ary manome toky fa ny habetsaky ny matavy sy proteinina ao amin'ny sakafo dia ampy. Ankoatr'izany, dia manome antoka fa mahazo sakafo mahavelona ianao, izay avy amin'ny vatan'ny glucose.
Nanomboka ny sakafo Atkins, ary nahagaga ny vokatra. Tao anatin'ny volana vitsivitsy, dia nesoriko ny tavin-tsakafo izay efa nahangona kely. Very mihoatra ny 33 kilao aho. Ankoatra izany, dia nesoriko ny fery teo amin'ny tavako izay noheveriko fa vokatry ny fanafody ampiasaiko amin'ny asako. Tamin'io fotoana io ihany koa no nanombohako ny fampiasana vatomamy voalohany, ary nahatsikaritra ny fiantraikany tamin'ny fanorenana masin'ny muscle aho.
Ny Makia nahazo doka voalohany
Nihorakoraka nandritra ny taona maromaro ny fampahalalam-baovao mikasika ireo loza ateraky ny fihinanan-tany Atkins satria noho izany dia ny sakafo matsiro, ny dibera ary ny atody. Olona maro no nanomboka ny "Atkins Diet" noho ny siny kely amin'ny fampahalalam-baovao, ka vokatr'izany dia nivarotra ronono ny fivarotana. Raha tsy misy fototra tsara fahalalana anefa, ny fihinanana ketogenika dia tsy mahomby, ary ny vokatra dia ratsy na mahatsiravina. Ny karajia Atkins dia ketogenika, ary raha manaraka tsara, dia mihinana legioma be dia be, proteinina maivana sy ampy tsara tavy.
Na izany aza, amin'ny sakafo ketogenea nataon'i Metodi Makia dia afaka mihinana ny sakafo hafa madio rehetra, afa-tsy ny tsiranoka tsotra. Ny habetsaky ny legioma dia takelaka iray antsasak'adiny, ka ny hizarany dia ambony lavitra noho ny amin'ny sakafo ara-dalàna.
Nandritra ny taona maro dia nanao fanandramana hanatsarana ny sakafo ketogène aho. Noho ny asako, dia nanana fahafahana aho hanana ny soatoavin'ny rako. Ny fomba Makia Reboot dia ny dikan-teny farany amin'ny programan'ny ketogène. Avy amin'ny fomba ofisialy Atkins izany, saingy misy fanatsarana manan-danja izay mahatonga ny fandoroana fofona mahomby kokoa.
Ny Methia Reboot dia ny fihinanana sakafo ketogenika izay ahafahanao manjary mavesatra. Rehefa manatona ny lanjany tsara ianao, dia handeha amin'ny fomba mahazatra Methode Basic Dieta izay tanteraka amin'ny fianakaviana manontolo.
Ny olana amin'ny fandaharam-pianarana isan-karazany dia matetika no mahatonga ny olona iray ao amin'ny fianakaviana mila miomana sy mandanjalanja ny sakafony manokana. Ny sakafo fototra nataon'i Metia dia natao mba hahafahan'ny fianakaviana iray mihinana sakafo mitovy. Raha miezaka ny hahatratra ny fanjakana ketogenika ny olona iray ao amin'ny fianakaviana, dia mivoaka avy hatrany ny ampahan'ny voambolana kômôhy. Raha tsy izany, ny sakafo dia mitovy ho an'ny rehetra.
Ny taona faramparany dia nanaparitaka ny paikady Method Macia aho. Nandritra ny taona maro, dia nanaraka fomba iray mitovy amin'izany fomba fiasa fototra nataon'i Method Makia izany aho, saingy teo am-piandohan'ity asa goavana ity dia nanampy tsiranoka tsotra toy ny mofo aho, mofo maitso, ovy, siramamy ary namela ny fanampim-bary. Na izany aza, ny tombony azoko tamin'ny lanjany dia tsy afa-nihetsika ary niakatra hatramin'ny 183 pounds hatramin'ny 208. 6 kilao isan-taona. Ny tanjoko dia ny hitsapana ny fihinanana sakafo ketogenika farany. Ny vokatr'ireo tsiranoka tsotra dia nihoatra lavitra noho ny nandrasana, ary sarotra ny nifehy ny volany. Vokatr'izany dia lasa mafy orina kokoa noho izay nataoko.
01. 01. 2015 Nanomboka ny Method Makia Reboot aho. Nandritra ny roa volana dia lany tamin'ny 176 ny lanjako. 4 pounds, ka ny vokatra farany amin'ny programan'ny fahavoazana dia tena mahomby. 32. 2 kilao amin'ny roa volana! Mampihoron-koditra, saingy nandritra ny fahaverezan'ny fahavoazana dia tsy nahatsapa hanoanana mihitsy aho. Ny vatako dia ampy hery foana ary nahatsapa ho tsara foana aho. Nanao fanazaran-tena foana koa ny Method Makia. Afaka manao fanatanjahan-tena ny olona mandritra ny fihinanana ketogenic.
Tena ilaina ny fahazoana fahalalana raha vao manomboka ny Method Makia Reboot. Ny fonosan-tserasera dia manazava ny zava-misy rehetra ilainao hanombohana fandaharam-pizakam-piadiana ketogène azo antoka. Ny fandaharam-piterahana ketogenic, raha ampiharina tsara, dia azo antoka sy mahomby. Na izany aza, raha tsy manana fahalalana tsara sy fanoloran-tena tsara ianao, dia tsy tokony hanomboka akory aza.
Ankoatra izany, mariho fa tsy voatery hanomboka ny sakafo ketogène ianao raha manana lanjany ara-dalàna. Amin'io tranga io, ny vatanao dia miasa tsara, ary tsy mila ny Method Makia Reboot ianao, fa ny sakafo fototra fotsiny dia ampy hanesorana ny faniriana zava-mamy ary hampihena ny fahatsapana hanoanana.
Farany, hilaza ny iray amin'ireo lehilahy hendry indrindra amin'ny fotoana rehetra aho, izay ny teniny no fitsipika mitarika ahy amin'ny fanomanana ity fonosan'orinasa ity.
"Raha tsy azonao atao ny manazava izany, dia tsy fantatrao tsara izany. "
J. A. Needlehill, mpanorina ny Method Makia